Inona no hatao raha azon'ny alikao ny hataony? | Tontolo alika
Ny biby fiompy namantsika izy ireoIreo no manome antsika fanampiana sy fiaraha-miasa ilaintsika amin'ny fiainantsika. Jereo ireo olon-tianao rehefa miaina karazana olana ara-pahasalamana Sarotra be izany ary ny tsy fahafahanao mamarana ity fanjakana ity ho an'ny biby fiompinao dia hampalahelo anao kokoa.
Toy izany koa no mitranga amin'ny fanintona ary izany no izy rehefa alika ny alikao, ilaina ny manome fanampiana lehibe indrindra mba hahafahanao mamita izany. Izany no azonao atao, satria amin'ny lafiny iray hafa dia ilaina ny manana fampahalalana sahaza momba ny fizotrany ary ny antony mahatonga ny fanintona ary misy toe-javatra izay ahafahan'ny alikanao mitondra tena amin'ny fomba samihafa izay tsy ampoizina.
Alika amin'ny alika
Amin'ireny fotoana ireny dia mila fantatrao ny antony sy ny fomba hanampianao azy ireo. Ireto misy ireto zavatra lehibe tokony hataonao rehefa mahatsapa ny alika ny alikanao:
Mampitony anao. Ary io dia tsy hihatsara ny toetran'ny biby fiompinao raha matahotra ianao. Tsy afaka manampy azy ireo ianao rehefa vonona hanao izany ianao.
Tokony ho voaomana ara-tsaina amin'izany, ka ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny milamina. Ao anaty tahotra tsy ho afaka hisaina tsara ianao ary vokatr'izany dia hampitombo ny toe-javatra amin'ny alikanao izany. Raha te hiaro ny biby fiompinao ianao dia mifantoha.
Toerana banga. Ny zavatra manaraka tokony hatao aorian'ny fitoniana dia esory ny toerana manodidina ny alikao ary izany dia araka ny asehon'ireo famantarana sy soritr'aretina, ny alika tratry ny fanintona Mety manana fihetsiketsehana an-tsitrapo haingana izy ireo, hahazoana antoka fa voaro ny alikanao.
Diovy ny toerana manodidina azy ary tazomy izy mandritra ny fanararaotana.
Miezaha hihazona halavirana azo antoka. Tsy misy olona mahita ny olon-tianao amin'ny toe-javatra sarotra, toy izany koa ianao, koa misy fotoana tianao anampiana ny alikanao amin'izay fotoana izay, fa mila mitazona elanelana azo antoka ianao.
Amin'ny lafiny iray, aza atao ao am-bavan'ny biby fiompinao ny tananao, satria hampidi-doza anao io.
Ataovy mahazo aina ny tontolo iainana. Vonoy ny jiro ary akatona ny ambainy, andramo ny mamorona tontolo milamina kokoa. Inona koa, vonoy ny fahitalavitra hialana amin'ny tabataba fanampiny Tazomy ny feo tony ary taomy ny ankizy hiala amin'ilay faritra.
Diniho ny faharetan'ilay fanafihana. Ity no ho zava-dehibe indrindra tokony hataonao amin'io fotoana io ary izany no faharetan'ny alikao miaina fanintona ilaina izany raha te hanome sary sahaza ny mpitsabo biby.
Karazam-panintonana sasany afaka maharitra minitra vitsy ary ny sasany mety ho lava koa ary ilay faharetan'ny fotoana hanjary singa lehibe iray amin'ny famaritana ny karazana fangalarana alika nanjo anao. Ho fanampin'izay, izy io koa dia hanampy haminavina ny fihetsika antenaina amin'ny alikao amin'izany toe-javatra izany.
Raketo horonan-tsary. Isaky ny mieritreritra ianao fa tsy hafahafa ny alikanao dia esory ny fakantsarinao ary firaketana ny fizotrany. Ka rehefa mitsidika ny mpitsabo biby ianao, ny horonantsary iray amin'ny fisamborana dia hanome anao hevitra tsara kokoa momba ilay olana ary ny fitiliana araka ny tokony ho izy dia hitarika amin'ny fitsaboana sahaza.
Miaraha amin'ny biby fiompinao. Rehefa misambotra ny alikanao dia mila ny sainao sy ny fanohanany izy ireo.
Omeo azy ireo ny fikarakarana sy fiheverana Tena afaka manampy azy ireo hivoatra izy io ary ny fieritreretana fa misy olona manampy anao amin'ny toe-javatra sarotra dia hampitombo ny hery hiadiana. Rehefa tapitra ny fisamborana, ny alikanao dia mety hiaina zavatra toy ny fahajambana tsy maharitra ary ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena, amin'ny fotoana ilainy ny fanampianao handresena ny hatairana.
Hamarino tsara fa tsy hiditra amin'ny toerana mampidi-doza toy ny tafo na tohatra izy ireo.
Tazomy ny firaketana ny fisamborana. Tazomy ny diary na lahatahiry misy ny daty voafintin'ny alika alikao, tadidio raketo ny halavan'ny fotoana, ny fihetsika alohan'ny hanombohana ny fisamborana sy ireo famantarana manan-danja hafa voamarikao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Inona no hatao raha azon'ny alikao ny hataony?
Ny niandohan'ny Samoyed